Pineapple foam - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Kudya4 maminitsi4 vanhu90 makarori
Pineapple furo iri zviri nyore kuzviita izvo zvinokushamisa iwe. Iwe unongoda izvo 4 zvigadzirwa uye mune isingasviki maminetsi mashanu iwe unenge uine dhizeti inonaka yekushandira pane chero chiitiko.
Haisi nguva yekutanga yatinoita izvi furo inokurumidza. Parizvino nguva dzose takazviita kubva kumastrawberry asi kubvira isu patakaedza iyi vhezheni tave kuvhenekerwa neyakaipisisa tropical kuravira
Sezvaunogona kufungidzira, chinanazi furo rakareruka, saka usazeze kurishandisa mushure mekudya kwemanheru kana kudya kwakanyanya nekuti naicho iri kugaya kudya zvakanyanya.
1 Pineapple furo
2 Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve chinanazi furo?
Iyo yakapusa uye inokurumidza nzira yekuita kuti unakirwe inozorodza uye yakajeka dhizeti.
Kubika nguva: 4M
Nguva yakazara: 4M
50 g birch shuga
300 g echisikigo chinanazi, akasvuurwa uye akaomeswa nechando muzvidimbu
1 tablespoon (saizi dhizeti) lime kana muto wemonimu
1 inotonhora zai chena
Isu tinoisa shuga mugirazi uye toipwanya mukati Masekonzi mashanu, kumhanya 10.
Wedzera zvidimbu zvechando chinanaini uye uzvipwanya Masekondi makumi maviri, kufambira mberi kumhanya 15-5-7.
Isu tinoisa shavishavi pane mashizha tichiva nechokwadi chekuti yakanyatsoiswa. Wedzera jisi remonimu uye zai jena uye rova 3 maminetsi, kumhanya 4.
Isu tinogovera mumagirazi kana magirazi uye tinoshumira.
Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve chinanazi furo?
Iyi dessert yakanaka kune shandira muzhizha kana pazviitiko zvakakosha nekuti idhisheni inozorodza, yakajeka uye inogaya.
Kugadzira furo iwe unogona kushandisa mhando yeshuga yaunonyanya kufarira uye kunyange kuitsiva nechinotapira chinoenderana nedhayeti yako. Kwatiri senge kushandisa birch shuga kana xiltol iri yakakodzera kune vane chirwere cheshuga.
Saka kuti dhizeti iyi yakanakira iwe chinanazi chinofanira kuve chando pamberi asi vachidzivirira izvo vanoramba vari mublock.
El hunyengeri ndeyekucheka kuita zvidimbu zvidiki, kudziisa mutray usinga vabate uye kudziisa chando. Mushure memaawa mashoma iwe unogona kuzviisa mu zip-kukiya bhegi kana mudziyo. Nenzira iyi vanoramba vakasununguka uye, kana zvasvika pakuvabvarura, zviri nyore kushanda navo.
Iyi furo inofanira zviite panguva yacho nekuti, kana ukazviita pamberi, zvinodzikira. Kunyangwe ichikurumidza kugadzira izvo zvakakosha kuronga kuti ushandise iri nyowani.
Mamwe mashoko - Chiedza sitirobhu furo / Pineapple marmalade
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Chikafu chine utano, Nyore, Desserts, Zhizha mabikirwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Thermorecetas » General » Nyore » Pineapple furo
Maria josefa akadaro
Zvakapfuma sei! Ndichazviita pasina kukundikana. Ndinoda mabikirwo ako.
Pindura kuna Maria Josefa
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako !!
Ichokwadi ndechekuti yakapusa kuita uye inotaridzika kushamisa.
Ehe, iwe unofanirwa kuzviita panguva yakakodzera kuti ushandire iyo asi zvakakosha!
Mhoroi, panzvimbo pekuwedzera birch shuga, unogona kuisa shuga yegirazi here? Ndatenda
Ehe, iwe unogona kuisa icing shuga uye zvakare yakajairika chena shuga.
Huwandu hwacho hwakaenzana nekuti hunotapira hunhu hwakaenzana, kunyangwe birch shuga ine GI 7, yakadzika zvakanyanya kupfuura iyo yeshuga yeshuga, inova makumi manomwe.